Afganistana: Fipoahana Herisetra · Global Voices teny Malagasy
Afganistana: Fipoahana Herisetra
Voadika ny 19 Avrily 2018 15:22 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Español, English
Olona maherin'ny 40, anisan'izany ireo dimy mpanao lalàna sy ankizy vitsivitsy, no maty tamin'ny Talata teo tao anatin'ny iray tamin'ireo fanafihana nahafaty olona be indrindra hatramin'ny nidarabohan'ny Taliban, hoy ny filazan'ireo mpiasam-panjakana Afgana. Marobe ireo blaogera nizara ny alahelony sy nitondra hevitra mikasika ity raharaha ity.
Milaza i Sanjar [Fa] fa maro ireo olona maty, anisan'izany ireo dimy mpikambana amin'ny parlemanta, nandritra ny fanafihana nanaovana vy very ny aina tao Baghlan, faritanin'i Afganistana, tamin'ny Talata 6 Novambra 2007. Milaza ny blaogera, araka ny antontanisa an'ny toeram-pitsaboana eo amin'ny faritany, fa maherin'ny 40 no maty ary 145 no naratra.
Hoy i HomeinKabul, “Vaky Fo daholo Izahay. Famoizana hafa indray ho an'ny Firenenay.”
Milaza ny Dialogue 3 [Fa] hoe tena ory dia ory izy fa maty nandritra io fanafihana fanaovana vy very ny aina io i Mostafa Kazemi, filohan'ny kaomisiona ara-toekarena taloha tao amin'ny parlemanta Afgana. Lazain'ilay blaogera fa very mpanao politika tena maranitsaina indrindra i Afganistana. Ambaran'ny Dialogue 3, fa pejy ampolony no voasorany nanohitra ireo fotokevitra sy hetsika nataon'i Kazemi, saingy malahelo hatrany tamin'ny famoizana azy izy.
Milaza i Asiaheart [Fa] fa tsy nitondra vokatra ireo Fivoriambe Ho An'ny Fandriampahalemana tao Afganistana. Tantarain'ilay blaogera fa tao anatin'ny roa volana, ny 9 Aogositra hatramin'ny 9 Oktobra, nisy 17 ireo fanafihana fanaovana vy very ny aina, 5 ny fipoahana ary olona 508 no maty.
Ireo tsaho sy herisetra
Hoy i Az Heart [Fa] misy tsaho ao Iràna fa lehilahy Afgana marobe hono no nihetraketraka (nanolana) ankizivavy iray 18 taona. Araka ny voalazan'ilay blaogera, asehon'ny sarimihetsika 90 segondra io zazavavy io mitalaho min'ireo lehilahy ireo mba tsy hanolana azy! Manoratra ilay blaogera hoe lavin'ireo tomponandraikitra Iraniàna ny filazana fa Afgana ireo lehilahy tao anaty sarimihetsika ireo, saingy rehefa nitatitra ireo gazety fa Afgana mpifindramonina izy ireo dia marobe ireo Afgana tsy nahalala na inona na inona akory no niharan'ny hatezeram-bahoaka ary voatsatoka antsy teny imasombahoaka.
Mpanao gazety tsy hita
Milaza i Sanjar fa:
Mpiasa iray matihanina amin'ny media i Ghows Zalmay. Nandritra ny fotoana ela no nahalalako azy. Nanao fanontàna ny fandikàna iray vaovao ny Korany izy. Voasambotra i Zalmay taorian'ireo fitarainana avy amin'ireo manampahaizana ara-pivavahana nilaza fa mifanohitra amin'ny silamo ilay fanontàna vaovao. Voasambotra tao amin'ny sisintany izy ny Alahady raha iny mbola nanandrana ny handositra tany Pakistana iny. Nisy mpanao fihetsiketsehana tany amin'ireo faritany Afgana roa nanohitra ilay fandikàna vaovao ny Korany ho Dari, fiteny faharoa tena fampiasa ao Afganistana. Mitroatra noho ilay fanontàna vaovao ny Boky Masina Miozolmana nataon'i M. Zalmay ireo mpahay ara-pivavahana .